အိုင်တီ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းမှ A+ Hardware, Networking, Web Developing သင်တန်းများကို ဖေဖော်ဝါရီတန်းခွဲများ 17,18,19,20 နေ့များတွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Classifieds, Personal Ad. » အိုင်တီ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းမှ A+ Hardware, Networking, Web Developing သင်တန်းများကို ဖေဖော်ဝါရီတန်းခွဲများ 17,18,19,20 နေ့များတွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အိုင်တီ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းမှ A+ Hardware, Networking, Web Developing သင်တန်းများကို ဖေဖော်ဝါရီတန်းခွဲများ 17,18,19,20 နေ့များတွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Frank Soolar on Feb 10, 2012 in Classifieds, Personal Ad. |0comments
အိုင်တီ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းမှ A+ Hardware, Networking, Web Developing သင်တန်းများကို ဖေဖော်ဝါရီတန်းခွဲများ 17,18,19,20 နေ့များတွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်း – 295679
A+ Hardware Course 1 Month ၊ သင်တန်းကြေး – 60000 Ks
ComTIA Original A+ Book ကိုသင်ရိုးအဖြစ်ထားရှိသင်ကြားသည်။ Computer အတွင်းရှိ Hardware Device ပစ္စည်းများအားလုံး အလုပ်လုပ်ပုံ အကြောင်းများကို အသေးစိတ် သိရှိနားလည် နိုင်ရမည်။
Registry အကြောင်း အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက်၊ User Account Control & Data Encryption
အကြောင်း၊ မိမိ Computer ကိုစနစ်တကျ လက်တွေ့တပ်ဆင်ခြင်း / စမ်းသပ်ခြင်း / ပြုပြင်ခြင်းများ ကို ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်နိုင်ရမည်။ အမျိုးမျိုးသော Operating System, Device Drivers, Softwares နှင့် Games များကို Install ထည့်သွင်းနိုင်ရမည်။ AntiVirus ထည့်သွင်းခြင်း နှင့် Update ပြုလုပ်ခြင်းကို ကျွမ်းကျင်ရမည်။ Storage Media & Data Recovery အကြောင်း၊ Win, Mac, Linux စသော OS မျိုးစုံကို Computer တစ်လုံးတည်းတွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း နှင့် LinuxOS ကို Microsoft Window ကဲ့သို့ အသုံးပြုခြင်းများ နှင့် Softwares များကို Activation, Patch, Crack, Online Register ပြုလုပ်ခြင်း မျိုးစုံကို အသေးစိတ်သင်ကြားပေးမည်။ Computer နှင့် Laptop များကို ဝယ်ယူရာတွင် ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ရမည်။ Computer များကို Network ချိတ်ဆက် နည်း နှင့် အင်တာနက် အီးမေးလ် အသုံးပြုလျှင်သိထားသင့်သောနည်းစနစ်များ၊ Metering & Tracing System board fault with QiGuan အသုံးပြုခြင်းနှင့် BIOS update, Tuning and Overclocking
အကြောင်းများကို သင်ကြားပေးပါသည်။ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက သင်တန်းသားများအနေဖြင့် လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် IT Computer သင်တန်းတွင် Job Training ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ရ မည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည်များကို ပြန်လည်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းသားများအနေဖြင့် သင်တန်းပြီးဆုံးပြီး အခြား Networking သင်တန်းတက်ရောက်ပြီး A+ Hardware & Network Administrator တစ်ယောက်အဖြစ် IT Technician တစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်လိုပါကလည်း အိုင်တီ ကွန်ပျူတာသင်တန်း မှ လိုအပ်သည်များကို ပံပိုးကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒါအပြင် MCSA, MCSE, Cisco နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲများ ဖြေဆိုလိုပါကလည်း ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်နိုင်ရန် သင်တန်းသားများအား သင်ကြားပေးနေပါသည်။
Networking Course 1 Month ၊ သင်တန်းကြေး – 60000 Ks
CompTIA Original N+ book ကို Course အဖြစ်ထားရှိပြီး Server Computer မှ Client Computer များသို့ Data များ၊ Software များနှင့် InternetConnection များကိုထိန်းချုပ်အသုံးပြုခြင်း၊ Network Topology နှင့် OSI Seven Layer အကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်၊ အမျိုးမျိုးသော Modems,
Switchs & Routers များကိုကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်၍ Configure လုပ်နိုင်ရမည်။ မိမိအသုံးပြုနေ သော Wireless Network ကိုလုံခြုံစွာကာကွယ်နိုင်ရမည်။ Routing & Switching, DMZ, Port FordwardingDNS, DHCP, Firewall များအလုပ်လုပ်ပုံနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊PortFilter, Packet Filter, Data Encryption, MAC filtering သင်ခန်းစာများ၊ADSL ( Bagan, MPT India, MPT Korea), Bagan WiMax, Redlink WiMax andSKYNET အစရှိသော Internet Connections များကို သင်တန်းတွင် လက်တွေ့တပ်ဆင်ထားရှိ သင်ကြားပေးသည်။ အလွန်ဝေးကွာသော နေရာတစ်နေရာမှ
တစ်နေရာသို့ ကြိုးမဲ့ကွန်ယက် ချိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းနည်းပညာများ၊ CCTV Camera များကို Wireless ထိန်းချုပ်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ Cisco Router, CPE, Omini, Parabolic Antanna များဖြင့် Outdoor Long Range ချိန်ညှိချိတ်ဆက်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် Web Development အခြေခံ စသည့်
အထူးပြုသင်ခန်းစာများအား ပြီးပြည့်စုံစွာ တာဝန်ယူ သင်ကြားပေးပါသည်။
Web Developing Course2Months ၊ သင်တန်းကြေး – 150000 Ks
Web Designer အဖြစ်ရပ်တည်လိုသူများ အတွက် HTML နှင့် CSS ကို အခြေခံမှစတင်၍ စနစ်တကျ သင်ကြားပေးပါသည်။ Photoshop ဖြင့် Professional Design များဖန်တီးခြင်း၊ Animated Gif file များဖန်တီးနည်း၊ Dreamwaver ဖြင့်အလွယ်တကူ စာမျက်နှာများ ဖန်တီးခြင်း Flash CS3 နှင့် Special effect များဖန်တီးခြင်း၊ Java Script Softwareကို အသုံးပြု၍ အသက်ဝင်သောစာမျက်နှာများ ဖန်တီး
ခြင်း စသော လွယ်ကူသောသင်ခန်းစာများနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည်။ Internet, WebDesign အတွက် လိုအပ်သောနည်းပညာ ဗဟုသုတများ နှင့် အသိပညာများကိုလည်း သင်ကြားပေးပါသည်။ HTML 4.01, HTML5,XML DOM, HTML DOM, jQuery, SQL, CSS 3, PHP, XSLT XPath, XSL-FO, HTMLColors, CSS3 စသည့် နည်းပညာသစ်များအကြောင်းပါ နားလည်အောင် သင်ကြားရမည် ဖြစ်သည်။(((((အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့်သင်တန်းတက်ရောက်သူသင်တန်းသားများသည်မိမိနာမည်ဖြင့်
( Eg:www.yourname.com) Domain အင်တာနက် Website တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။)))))….
Web Developing & Web Design Course
-Introduction to internet, WWW & Web Design Analysis
-Hyper Text Markup Language (HTML) and Cascading Style Sheet (CSS)
-Adobe Photoshop CS3 and Adobe Flash CS3 ( Create Web Design )
-Web Development Analysis
-Web Marketing ( Online & Offline Marketing )
-Web Design & Analysis
-Advanced HTML ( Develop HTML with Dreamwaver )
-Advanced Adobe Flash CS3 ( Action Script )
-Knowledge in Domain Management, Hosting Management
အိုင်တီ ကွန်ပျူတာ သင်တန်း
အိုင်တီ ကွန်ပျူတာသင်တန်းကို သင်ကြားရေး ကျွမ်းကျင်သော ဆယ်စုနှစ်အထက် အတွေ့အကြုံရင့် သင်တန်းနည်းပြ ဆရာ/ဆရာမ များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ကျောင်းသား / ကျောင်းသူ များ နှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်နေသော ဝန်ထမ်းများ အတွက် ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့် အချိန် အခက်အခဲ မဖြစ်စေရေးကို ဖြေရှင်းပေးပါမည်။
အိုင်တီကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းတွင် ၁ဝ-တန်းအောင်မြင်ပြီးသော ကျောင်းသား/ သူများ ကွန်ပျူတာကို အခြေခံမှ စ၍ စတင်လေ့လာလိုသူများ နှင့် ကွန်ပျူတာကို အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းပညာရပ် တစ်ခုအနေဖြင့် COMPUTER PROFESSIONAL ဖြစ်သည့်အထိ ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပေးပါသည်။
သင်တန်းကြေးများကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် နှင့် လွယ်ကူစွာ တတ်မြောက်နိုင်အောင် ကျွမ်းကျင် ဆရာ / ဆရာမများက တာဝန်ယူ သင်ကြားပေးနေပါသည်။
လုပ်ငန်းခွင် ဝင်လိုသူများအတွက် လွယ်ကူထိရောက်ပြီး နားလည်သဘောပေါက်လွယ် သော လက်တွေ့သင်ခန်းစာများ။
သင်ကြားရေးတွင် ဆယ်စုနှစ်အထက် ကျွမ်းကျင်ဆရာ/ဆရာမများမှ စနစ်တကျ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိအောင် အထူးဂရုစိုက်သင်ကြားပေးခြင်း။
သင်တန်းပြီးဆုံးသွားသော သင်တန်းသားများအား ကျွမ်းကျင်မှုကို စစ်ဆေးပေးပြီး
ကျွမ်းကျင်မှုမရှိပါက လိုအပ်သည်များကို ပြန်လည်သင်ကြားပေးပါသည်။
IT Computer Training Center ( I ) – No.159, 39th Street (Middle Block), Kyaktada Tsp, Yangon. Tel : 377236 , 0949290778
IT Computer Training Center (2) – No.93-94, Between 49th Street & 50th Street Bogyoke Aung San Road, Puzuntaung Tsp, Yangon. Tel : 295679, 095039251
IT Computer Training Center (3) – No.105, Between 50th Street & 51th Street Anawrahta Road, Puzuntaung Tsp, Yangon. Tel : 291796, 9010368